Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Sheegtay iney la hadleyso cid walba ka fikir duwan | SAHAN ONLINE
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Sheegtay iney la hadleyso cid walba ka fikir duwan
Cabdi Faarax Siciid[Juxaa]
MUQDISHO – Wasiirka Arrimaha Gudaha,Federaalka iyo dib u heshisiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Juxaa ayaa sheegtay in Xukuumadu ay mudnaanta 1aad siineyso arrimaha dib u heshisiinta iyo Amniga.
Cabdi Faarax Juxaa ayaa ka dhawaajiyey in cid kasta oo ka fikir duwan ay la hadleyso dowladu.
Waxa uu sheegay in howlaha Wasaaradiisu wado ee dib u heshisiinta ay sii soconeyso,isagoo qiray in waxyaabaha la isku hayo ay kala gedisan yihiin isla markaana ay kala heerar yihiin.
Waxa la isku haayo waa kala gedisan yahay, waana kala heerar, waa jirana waxyaabo la isku haayo ama ha ahaato Kheyraad, siyaasad, Dastuur ama awoodeed, waqti bey qaadaneysa in la wada hadlo, cidii naga fikir duwan ama xabad nagu soo rideysa in lala hadlo diyaar baa lala yahay”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Sidoo kale waxa uu sheegay in dalkan la wada leeyahay isla markaana wixii jira la isaga soo dhawaan doono ,cid kastana ay albaabada u furan yihiin.
Dalkaan waa la wada leeyahay, cid kasta albaabada waa u furan yahay, in miiska wada hadalka waa furan yahay”ayuu yiri Wasiir Juxa oo hadaladiisa u muuqday kuwo uu si gaar ah uga hadlayay xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo khilaafyada dhanka dastuurka iyo awoodaha dalka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xiligan wajahaysa culeyso siyaasadeed oo uga imaanaya gudaha iyo dibadda,waxaana dadka dhaliila siyaasada dowladda sheegaan in dowladu albaabada xiratay isla markaana aayaha dalka uu gacanta u galay shaqsiyaad gaar ah.